यो एक साधारण विचार छ जब तपाईं पहिलो डेटिङ सुरु र कसैले साँच्चै सुरु गर्न विकास भावना छ ।, र यो हुन्छ, सबै पनि अक्सर । तपाईं पूरा एक मान्छे गरौं, आफैलाई हुन हटाउन द्वारा भावना र तपाईं सवारी को एक लहर लागि उच्च आशाहरू के भविष्यमा पकड हुनेछ मात्र पत्ता लगाउन नै महसुस र छैन. खोजी एक मान्छे, तपाईं जस्तै जस्तै तपाईं फिर्ता छ क्रशिंग छ ।, खोजी एक केटा जस्तै तपाईं साँच्चै तपाईं रुचि फिर्ता र चाहनुहुन्छ भने तपाईं संग हुन चाहनुहुन्छ एक गम्भीर सम्बन्ध तपाईं संग छ रमाइला र एकदम संभवतः एक. खुसीको कुरा, त्यहाँ छन् केही राम्रो बलियो गप्पी संकेत कि एक केटा बारे गम्भीर छ, तपाईं तिनीहरूले छौं भन्ने कुरा धेरै ज्यादा सबै मान्छे गर्दा के तिनीहरूले साँच्चै जस्तै एक महिला ।: गर्छ उहाँले साँच्चै तपाईंलाई प्रेम । (र सही) गर्छ»उहाँले साँच्चै तपाईं प्रेम»प्रतियोगिता अहिले भने र पत्ता, उहाँले साँच्चै तपाईंलाई प्रेम गर्नुहुन्छ. भेट कहिल्यै एक मान्छे त इमानदार । उहाँले व्यक्त आफूलाई खुलेर, वार्ता भविष्यको बारेमा, र. उहाँले यदि होइन भने खुल्लमखुल्ला कुरा तपाईं संग, त्यसपछि यो एक चिन्ह हो भनेर उहाँले, सबैभन्दा संभावना महसुस भइरहेको बारे मा एक सम्बन्ध छ तपाईं संग छ । मान्छे तपाईं जस्तै लागि बस्न सक्छ घन्टा र घण्टा कुरा तपाईं संग छ ।. उहाँले सोध्छन् को एक टन प्रश्न छ । भनेर भन्दा अधिक, उहाँले सुन्नुहुन्छ र ध्यान सम्झनुहुन्छ सबै विवरण छ । उहाँले साँच्चै बारे उत्सुक र तपाईं चाहनुहुन्छ सबै पत्ता लगाउन त्यहाँ छ थाह छ । झाडी आसपास पिटे. उहाँले भन्नुभयो कि तपाईं उहाँले गर्न चाहनुहुन्छ हुन अनन्य रूपमा एक जोडी छ ।. जब एक मानिस बनाउन गर्दैन, आफ्नो मनसाय थाह छ, तपाईं अन्त मा एक सम्बन्ध कुनै मानिसको भूमि । तपाईं थाहा छैन भने, तपाईं अनन्य छन्, तर तपाईं लाग्छ कि शायद तपाईं छन्. सरकारी छैन, तर तपाईं हुनुहुन्न देखेर अरू कसैलाई या त. एक मानिस जसले चाहन्छ संग एक सम्बन्ध, तपाईं बनाउन हुनेछ यो स्पष्ट छ कि उहाँले चाहनुहुन्छ र तपाईं केवल तपाईं, उहाँले होला टी कुराहरू छोड्न खुला गर्न अर्थ र गुमाउने जोखिम मा तपाईं केही अन्य मान्छे. उहाँले प्रतिज्ञा लिन तपाईं एक पार्टी मा शुक्रवार रात पछि बोझिलो दिन मा काम छ र उहाँले तपाईं माथि । एक मानिस हुन चाहन्छ जो संग सम्बन्ध मा तपाईं राख्न हुनेछ आफ्नो प्रतिज्ञा गर्न सक्नुहुन्छ । उहाँले बनाउन छैन खाली प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ ।. उहाँले अधिक हुन्छ निवेश, तपाईं अधिक र अधिक महत्त्वपूर्ण छ उहाँलाई । उहाँले के हुनेछ आफ्नो शक्ति मा सबै गर्न कहिल्यै तपाईं निराश. र उहाँले गर्छ भने तपाईं निराश, उहाँले दुखी महसुस र जे उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ, यो बनाउन तपाईं सम्म छ । यदि यसको स्पष्ट छ कि तपाईं उहाँले तपाईं बनाउँछ एक प्राथमिकता, कि उहाँले बनाउँछ, एक प्रयास छैन पत्र गर्न वा छोड्न तपाईं झुन्डिएको छ कि, उहाँले साँच्चै गर्न लाठी उहाँको वचन (यदि उहाँ भन्नुहुन्छ उहाँले मा तपाईं कल गर्न, त्यसपछि उहाँले हुनेछ कल मा.), तपाईं पक्का हुन सक्छौं कि उहाँले बारे गम्भीर छ । यो सम्बन्ध मा, यो पछिल्लो बिन्दु । तपाईं पहिलो आफ्नो जीवन समय को बहुमत छ । पहिलो हरेक एकल समय छ किनभने बस सम्भव छैन. कहिलेकाहीं अन्य कुराहरू हुनेछ लिन, तर पनि गर्दा हुन्छ कि, उहाँले गरिनेछ निश्चित गर्न. प्राथमिकता होइन उहाँले रहेको छ त्याग्ने गर्न अरू सबै मा जा आफ्नो जीवन मा सबै आफ्नो समय खर्च गर्न तपाईं संग छ । र तपाईं होला टी हुन चाहनुहुन्छ मा एक सम्बन्ध जस्तै कि जे भए पनि, यसको विषाक्त र अस्वस्थ छ । भइरहेको एक प्राथमिकता हो तपाईं उहाँलाई कुरा छ । आफ्नो आवश्यकता र चाहनुहुन्छ कुरा हो । र तपाईं पुन उहाँको लागि महत्त्वपूर्ण छ । उहाँले योजना रद्द अन्तिम मिनेट मा (नभएसम्म यसको आपतकालीन), र उहाँले पनि छैन योजना बनाउन अन्तिम मिनेट. उहाँले झुन्डिएको प्रतीक्षा, मा उहाँलाई । उहाँले बाहिर अन्तरिक्ष तपाईं आफ्नो जीवन मा, तपाईं धकेल्नु आफ्नो बाटो मा त्यहाँ. कुरा सस्तो हुन सक्छ.
तपाईं जस्तै कसैले देखाउने मार्फत यो कार्य फरक कथा छ । एक मानिस कार्यहरू हुनेछ कहाँ छ ठ्याक्कै तपाईं देखाउन उहाँले खडा. जब एक मानिस बारे गम्भीर छ, तपाईं यो लेखिएको छ, सबै भन्दा उहाँलाई । यसको बाटो मा, उहाँले मा देखिन्छ तपाईं. यसको मा पनि कुराहरू उहाँले गर्छ । उहाँले लिन्छु आफूलाई बन्द डेटिङ साइटहरु र अनुप्रयोगहरू. उहाँले कटौती छौँ बन्द सबै संग सम्पर्क, लूट कल, र बालिका उहाँले थियो»कुरा»गर्न । तपाईं मुख्य महिला. आफ्नो मानिस मालिक एक कार, एक जाँच र बचत खाता संग पैसा दूर राखे, र एक ठूलो काम छ । उहाँले आर्थिक स्थिर र खुसी आफ्नो काम छ । उहाँले भाँडा र पनि थाह छ कुक गर्न कसरी. शायद उहाँले देख गर्न एक घर किन्न । मानिसहरू लागि, समय सबै छ । भने, उहाँले अझै पनि गर्न चाहन्छ बाहिर त्यहाँ जान र यो बाँच्न र रोप्न आफ्नो लौकिक जंगली जौँ, त्यसपछि उहाँले. नम्बर एक तरिका थाह भने, उहाँले छ गम्भीर, तपाईं बारेमा छ, उहाँले चाहनुहुन्छ एक प्रतिबद्ध सम्बन्ध र कुन यो संग आउछ. फर्कनु, प्रतिबद्धता, सिर्जना एक जीवन र भविष्य सँगै (र शायद यो पनि एक परिवार). के छ भनेर उहाँले चाहनुहुन्छ, र तपाईं चाहनुहुन्छ के छ, ताकि तपाईं दुवै डुङ्गा रोविङ एउटै निर्देशन छ । तपाईं लड्न सक्दैन, यो ज्वारभाटा विरुद्ध तपाईं सधैं गुमाउन ।, उहाँलाई विश्वास. जब उहाँले समस्या छ, उहाँले लाग्छ आफ्नो सल्लाह ध्यानमा. जब उहाँले सोध्छन् लागि आफ्नो राय मा, उहाँले पनि सुन्नुहुन्छ । उहाँले ख्याल राख्नुहुन्छ तपाईं के लाग्छ र तपाईं महसुस कसरी. उहाँले पक्षहरूमा के तपाईं भन्न । हेर्न गर्दा उहाँले ठान्नुहुन्छ आफ्नो राय छ । त्यो साँच्चै तिनीहरूलाई विचार, वा त्यो रोल आफ्नो आँखा र तपाईं बनाउँछ महसुस, मूर्ख? तपाईं भेट गर्नुभएको आफ्नो आमाबाबु र परिवार । तपाईं भेट गर्नुभएको आफ्नो मित्र छ । भनेर भन्दा अधिक, तपाईं संग समय खर्च तिनीहरूलाई छ । तपाईं बताउन सक्नुहुन्छ भने एक मान्छे बारेमा गम्भीर छ तपाईं हुनुहुन्छ भने तपाईं तंग संग आफ्नो भित्री सर्कल छ । उहाँले छौँ ल्याउन तपाईं मा आफ्नो विश्व र पक्का तपाईं पूरा गर्ने सबैलाई महत्त्वपूर्ण छ उहाँलाई । उहाँले तपाईं चाहनुहुन्छ जस्तै तिनीहरूलाई र तिनीहरूलाई तपाईं जस्तै. जब एक मानिस हुन चाहनुहुन्छ एक महिला संग, आदर उनको परिवार । उहाँले चाहनुहुन्छ हुनेछ आफ्नो मित्र र परिवार उहाँलाई जस्तै छ । उहाँले प्राप्त हुन सक्छ स्नायु बैठक अघि. उहाँले सोध्न सक्छ भने तिनीहरूले गरे जस्तै उसलाई यसपछि. उहाँले धेरै चिन्तित बनाउने एक राम्रो छाप छ । भने एक मान्छे थियो बारेमा गम्भीर, तपाईं राम्रो उहाँले बस. उहाँले वार्ता भविष्यको बारेमा र सबै कुराहरू तपाईं के गर्न सक्छ सँगै । आफ्नो दृष्टि को भविष्य छ कि एक समावेश तपाईं यो मा, र उहाँले बनाउँछ भनेर तपाईं थाह छ । मात्र बनाउन अमूर्त, योजना त जस्तै, सुझाव तपाईं छोड्ने आफ्नो जब र विश्व यात्रा सँगै । उहाँले हुने कुरा मा ठोस सर्तहरू मा, उहाँले तपाईं थाहा दिनु हुनेछ, उहाँले गर्न चाहनुहुन्छ कदम मा जब तपाईं संग आफ्नो पट्टा मा समाप्त जुन सेट र जस्तै तपाईं गर्न सुरु देख लागि ठाउँ छ । उहाँले स्पष्ट लक्ष्य र र उहाँले काम गर्नेछ भविष्य तिर दिन्छ कि तपाईं पनि गहिरो मा गुना । आफ्नो आनन्द छ, उहाँको आनन्दको चिन्ह उहाँले गर्न चाहनुहुन्छ संग तपाईं सामेल भनेर उहाँले गर्छ जे उहाँले गर्न सक्छन् तपाईं आनन्दित बनाउन. उहाँले चाहनुहुन्छ तपाईं आनन्दित बनाउन रूपमा, आफ्नो आनन्द बनाउँछ उहाँलाई खुसी छ । उहाँले ध्यान हुनेछ, आफ्नो चाहनुहुन्छ र आवश्यकता. एक ठूलो गोप्य अधिकांश महिला मानिसहरू सबै एक मानिस साँच्चै आवश्यकता मा आनन्दित हुन, एक सम्बन्ध छ लागि आफ्नो महिला हुन खुसी छ । त्यो धेरै ज्यादा यो । तर यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण बिन्दु मनमा राख्न: तपाईंको आनन्द छैन, यो जिम्मेवारी यसको. र यो छैन यो काम गर्न तपाईं आनन्दित बनाउन (यो यो हुन सक्छ पनि भने, उहाँले गर्न इच्छुक थियो). को मामला मा, उहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँले गर्छ । उहाँले सुन्नुहुन्छ आफ्नो अनुरोध गर्न खोज्छ अटाउन आफ्नो इच्छा गर्छ र सोच्छ, तपाईं भन्न हुनेछ तपाईं आनन्दित बनाउन. र उहाँले गर्छ र यो खुशी छ किनभने, उहाँले गर्न चाहनुहुन्छ तपाईं आनन्दित बनाउन. उहाँले सधैं तपाईं थाह दिन्छ भने कुरा आउछ पनि भने, यो कुरा रूपमा सानो रूपमा हुनु केही मिनेट लेट बाहिर झुन्डियो. गायब मा तपाईं, त्यसपछि फेरि देखापर्नु र काम जस्तै यो कुनै ठूलो सम्झौता र त्यसपछि प्राप्त नाराज सोध्न जब तपाईं जहाँ उहाँले गरिएको छ । उहाँले रहन्छ नियमित सम्पर्क तपाईं संग छ । उहाँले तपाईं थाह दिन्छ भने त्यो जा गर्न व्यस्त हुन वा माथि गाँसिएको छ । उहाँले कारक मा आफ्नो भावना, र उहाँले. तपाईं प्राप्त छैन कि, बिरामी डूब भावना खाल्टो मा वा आफ्नो पेट उहाँले अचानक हराएको चासो र छतपाईं. उहाँले गर्छ भने, जे कारण लागि, जान लागि समय को एक विस्तारित अवधि बिना बाहिर व्यापक (म कुरा गर्दै छु, जस्तै, एक दिन, छैन दिन), तपाईंलाई थाहा छ. यो किनभने, उहाँले एक राम्रो कारण र उहाँले गर्छ । यो एक प्रमुख साइन कि मान्छे जस्तै तपाईं चाहनुहुन्छ तपाईं संग हुन. के निर्धारण गर्छ कि एक मान्छे हुनेछ प्रतिबद्ध गर्न एक महिला छ कसरी राम्रो यो महसुस गर्दा उहाँले छ उनको? मान्छे तिर सार्न महसुस के राम्रो छ । जब उहाँले को पर्याप्त प्राप्त गर्न सक्दैन तपाईं, यो देखाउँछ कि उहाँले बारे गम्भीर छ । उहाँले उत्प्रेरित भन्दा छिटो तपाईं गर्न चाहन्थे छन्. उहाँले पक्षहरूमा. उहाँले पनि पक्षहरूमा गति. उहाँले पक्षहरूमा आफ्नो आवश्यक छ । यदि तपाईं प्रतीक्षा गर्न चाहन्थे रही अघि घनिष्ठ, उहाँले ठीक हो, यो संग. उहाँले गर्दैन दबाव वा तपाईं कुनै पनि तरिका मा. जब एउटा मान्छे को रुचि, एक केटी उहाँले चाहनुहुन्छ उनको जस्तै कुराहरू उहाँले रुचि छ । उहाँले चाहनुहुन्छ, दिनु उनको मा आफ्नो संसारमा । उहाँले देखाउन चाहन्छ उनको आफ्नो मनपर्ने यो गतिविधिहरु, र सोख छ । आशा उनको प्रेम यी कुराहरू जति उहाँले गर्नुहुन्छ, तर उहाँले अझै पनि. साझेदारी गरेर के त्यो बारे मा भावुक, उहाँले साझेदारी को एक धेरै बारे आफूलाई । आफ्नो हालको सम्बन्ध संग, उहाँलाई सजिलो छ । तपाईं आराम गर्न सक्छन् र बस हुन छ । हेर्न आवश्यक के तपाईं भन्न र तपाईं कसरी व्यवहार । लेख्न र पुनर्लेखनरविस्तार, एक पाठ एक सय पटक अघि बढ्न पठाउन. तपाईं तनाव छैन भन्दा सम्बन्ध छ । तपाईं बस आफ्नो समय आनन्द सँगै । तपाईं बस भनेर थाह, उहाँले गर्न चाहनुहुन्छ तपाईं संग हुन. अन्य मानिसहरूलाई बताउन सक्नुहुन्छ रूपमा राम्रो तरिकाले. उहाँले तपाईं भन्नुभयो उहाँले । उहाँले कार्यहरू जस्तै तपाईं छौं एक जोडी पहिले र व्यवहार तपाईं एकदमै आदर र हेरविचार । तपाईं हुन सक्छ असुरक्षित मा भरोसा यो छ, तपाईं पछि हुन सक्छ नसुल्झाइएको घाउ. तर समग्र, तपाईं सुरक्षित महसुस र सुरक्षित गर्न सम्बन्ध मा. तपाईंलाई थाहा छ, उहाँले ख्याल राख्नुहुन्छ, र तपाईंलाई थाहा छ कि उहाँले जा छैन कहीं. यदि तपाईं यस लेखमा पढ्न र निष्कर्षमा पुगे कि मान्छे हुनुहुन्छ रुचि हुन चाहन्थे मा एक गम्भीर सम्बन्ध संग, तपाईं बधाई छ । अब चिंता रोक्न यो बारेमा जाने र यो आनन्द, तपाईं मात्र एक प्राप्त शुरुवात र तपाईं फिर्ता जान कहिल्यै. तपाईं कि निष्कर्षमा पुगे को मान्छे, तपाईं मा रुचि राख्नु हुन्छ महसुस नै यसको.
यसको अब थाहा, सही
अब तपाईं मुक्त गर्न सक्छन् आफैलाई पाउन जो कसैले आफ्नो भावना छ । म यस लेखमा तपाईं मदत गर्नुभयो भने बाहिर आंकडा उहाँले. तपाईं बनाउन अघि कुनै पनि निर्णय, तपाईं सजग हुन आवश्यक दुई प्रमुख क्षण मा हरेक सम्बन्ध निर्धारण गर्नेछ भने यो रहन्छ, वा तपाईं प्राप्त भने आफ्नो हृदय भाँचिएको छ । केही बिन्दु मा, एक मान्छे सोध्न हुनेछ आफूलाई: यो महिला म प्रतिबद्ध गर्न चाहनुहुन्छ गर्न लामो अवधि लागि. जवाफ निर्धारण गर्नेछ. तपाईं के थाहा एक मानिस बनाउँछ भनेर निर्णय गर्न एक महिला छ, प्रेमिका भौतिक रूपमा विरोध गर्न बस एक टूट पडना. तपाईं के थाहा एक मानिस बनाउँछ प्रतिबद्ध गर्न चाहनुहुन्छ? छैन भने, तपाईं यस लेखमा पढ्न अर्को: कुराहरू मानिसहरूको इच्छा मा एक महिला को दोस्रो सम्बन्ध मुद्दा लगभग हरेक महिला सामना गर्नेछ छ जब उहाँले देखिन्छ चासो गुमाउन र सुरु झिक्न गर्न । पाठ फिर्ता, उहाँले कम ध्यान दिएर, र केही बस बन्द छ । उहाँले देखिन्छ जस्तै उहाँले दूर खींच र तपाईं गुमाउन सक्छ उहाँलाई पूर्ण के तपाईं के गर्न के थाहा । छैन भने, यो पढ्न अहिले भने उहाँले दूर खींच, यो के. गर्छ उहाँले साँच्चै तपाईंलाई प्रेम । (र सही) गर्छ»उहाँले साँच्चै तपाईं प्रेम»प्रतियोगिता अहिले भने र पत्ता, उहाँले साँच्चै तपाईंलाई प्रेम गर्नुहुन्छ. तपाईं हेर्नुभयो हाम्रो रहस्य छ, एक मानिस बनाउन प्रेम तिमीलाई’ को भिडियो अझै छ । हामी पर्दाफास भन्दा साधारण गल्ती महिला बनाउन रोक्न एक मानिस’ प्रेम मरेको मा आफ्नो ट्रयाक. र यो बारेमा के गर्न. हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् यो अब छ ।. गर्न चाहनुहुन्छ कति थाह आफ्नो मान्छे साँच्चै तपाईं चाहनुहुन्छ. (र सही) ‘ले जस्तै उहाँले मलाई’ प्रतियोगिता अहिले ‘मा तपाईं’ उहाँले साँच्चै छ । अब एक नयाँ मोड छ, इंक. सबै अधिकार सुरक्षित. भौतिक यो साइट मा हुन सक्छ, वितरण, प्रसारित, क्यास वा अन्यथा प्रयोग रूपमा बाहेक, अनुमति लेखन मा एक नयाँ मोड छ, इंक
← सेक्स भिडियो च्याट. कामुक बालिका संग च्याट अधिक अठार को उमेर
र धनी लागि देख महिला पुरुष गर्भवती प्राप्त गर्न सम्पर्क नम्बर →